काठमाडौं उपत्यकामा लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, हेर्नुहाेस गृह मन्त्रालयको उर्दीसहित — Sanchar Kendra
काठमाडौं उपत्यकामा लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, हेर्नुहाेस गृह मन्त्रालयको उर्दीसहित
काठमाडौं । सरकारले काठमाडाैं उपत्यकामा नयाँ नियम लागु गरेकाे छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिएकाहरुलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा राख्न तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ ।
घरधनीले पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न नदिएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षण गर्नेको भीड लाग्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा गृहले पत्रिपत्र जारी गरेको हो ।
पीसीआर टेष्टका लागि आउनेहरु बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरुलाई १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्ने र लक्षण देखिएमा मात्र अस्पताल आउने व्यवस्था गर्न गृहमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि गृहले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिश्ल्ला अधिकारीहरुलाई स्वास्थ्यको पत्रअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरु १४ दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेटमा बोल्दै बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आउने व्यक्तिले १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताएका हुन् ।
डा गौतमले उपत्यका बाहिरबाट आउनेलाई घरबेटीले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट माग्ने गरेको प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए । उनले उपत्यका बाहिरबाट भित्रिँनेवित्तिकै कोरोना परीक्षण गर्न नपर्ने तर १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा कोरोनाको लक्षण देखिएमा भने स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा उपत्यका बाहिरबाट भित्रिने घरडेरा गरी बस्ने मानिसहरुलाई केही घरभेटीहरुले कोभिड १९ को पीसीआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको बुझिएको छ, यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ डा गौतमले भने, ‘बाहिरबाट उपत्यका भित्रिनेबित्तिकै कोरोना परीक्षण गर्न नपर्ने र १४ दिन सम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, सो अवधिमा लक्षण देखापरेमा अस्पताल गइ चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र परीक्षण हुनेछ ।’
उनले उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आउनेलाई कोरोना परीक्षणको दवाब नदिन पनि अपिल गरेका छन् । उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि व्यापार व्यवसाय रोजगार दाता लगायत सबैले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सबै किसिमका भेला तथा जमघटहरुमा कम्तिमा २ मिटरको दुरी अनिवार्य रुपमा प्रयो गर्ने, घर बाहिर निस्किँदा सर्जिकल मास्क वा तीन तह भएको कपडाको मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले यस्ताे निर्णय गरेका बेला नयाँपत्रिका दैनिकले भने “नागढुंगा र साँगा आइपुगेका सर्वसाधारणलाई असाधारण कष्ट : आरडिटीको रिपोर्ट देखाउँदा पनि राजधानी प्रवेश कठिन” शिर्षकमा लेखेकाे समाचार यस्ताे छ ।
काठमाडौं र धादिङको सीमा सिस्नेखोलामा गाडीको जाम, मोटरसाइकलमा आएका यात्रु निथु्रक्क भिजेका छन् । गन्तव्य काठमाडौं त नजिक आइपुग्यो, प्रहरीको व्यवहार कस्तो हुने भन्नेमा यात्रुहरूको मनमा आशंका छ । विनोद चौहान, शम्भु बैठा पर्साको पोखरियाबाट आएका हुन् । रोकिएको मोटरसाइकलनजिक आएर प्रहरीले सोधे, ‘पास छ ?’
‘पास छ सर, कोरोना टेस्ट गरेको रिपोर्ट पनि छ,’ विनोदले जवाफ फर्काए । पोखरिया नगरपालिकाले जारी गरेको सवारी पास हेरेपछि प्रहरीले तत्कालै आदेश सुनाए, ‘जताबाट आएको हो उतै जानू ।’ अलमल्ल परेका उनीहरूलाई तर्साउँदै प्रहरीले भने, ‘भनेको सुनिएन, जताबाट आएको हो उतै जाने । काठमाडौं जान पाइँदैन ।’
ललितपुरको हात्तीवनमा निर्माण मजदुरको काम गर्ने विनोद र शम्भु घरमा खर्च सकिएपछि रोजगारी जारी राख्न राजधानी आउने प्रयासमा थिए । तर, सार्वजनिक यातायात नचलेकाले उनीहरू छिमेकीको मोटरसाइकल मागेर आउँदै थिए ।
काठमाडौं नाकामा कोरोनाको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा आरडिटी परीक्षण पनि गराए । यसमा १५ सयका दरले पैसा खर्च भयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले काठमाडौं छिर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो । तर, अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्ट र नगरपालिकाको पास प्रहरीले तत्कालै खारेज गरिदिए ।
‘जब आरडिटी परीक्षण अर्थहीन छ भने सरकारले त्यस्तो परीक्षण गर्ने अनुमति स्वास्थ्य संस्थालाई किन दिइरहेको छ ? देशको ढुकुटी खरिद गरेर सरकारले आरडिटी किन खरिद गरिरहेको छ ?’ विनोद सोध्ने कोसिस गर्छन्, तर प्रहरीसँग जवाफ छैन, उनको मुखमा आदेश मात्र झुन्डिएको छ, ‘रिपोर्ट त पिसिआर नै चाहिन्छ ।’
विनोद र शम्भु दुवैजनाको खुट्टामा चप्पल मात्र छ । ‘जुत्ता किन्ने पैसाले कोरोना जाँच गराएका,’ शम्भुले भने, ‘घरमा छाक टार्न पनि पैसा छैन । पाँचजनाको परिवार छ । परिवारमा कमाउने म एक्लै हो । काठमाडौंमा काम सुरु भएको खबर पाएकोले आएको हुँ, अरू जान हुने, हामी जान नहुने किन ?’
विनोद र शम्भुजस्तै अरू सर्वसाधारण पनि रोकिएका छन्, उनीहरू सबै अलमल परेर सिस्नेखोलाको छेउमा उभिएका छन् । लगातार परेको पानीले माटो पग्लिएको छ, तर निमुखाको अवस्थाले प्रहरीको मन पग्लिएको छैन । पर्साको वीरगन्जबाट आएका हुन् विलाल अन्सारी । मोटरसाइकलमा आएका उनीसँग रेनकोट पनि छैन् । झरीले होइन, उनको मनोबल प्रहरीको आदेशले कमजोर बनाइदिएको छ ।
विलालको यो पहिलो प्रयास होइन । काभ्रेको भकुन्डेबेंसीमा मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्ने उनी अघिल्लोपटक बिपी राजमार्गबाट आएका थिए । ‘तर, त्यहाँ (नमोबुद्ध नगरपालिका)को मेयरले कोरोना जाँच गरेको रिपोर्ट नल्याएसम्म बस्न दिन्न भन्नुभयो, त्यसैले फर्किएँ,’ विलालले भने ।
वीरगन्ज गएर उनले पनि १५ सय रुपैयाँ तिरेर आरडिटी परीक्षण गराए । परीक्षणको रिपोर्ट र नगरपालिकाले जारी गरेको पास बोकेर आएका थिए । तर, सिस्नेखोलामा उनलाई पनि प्रहरीले रोके ।
आम्दानी शून्य भएपछि परिवार भोकै मर्ने अवस्था आएको सुनाउँछन् विलाल । ‘१८ जनाको परिवार छ । कतारमा भएको दाइलाई कोरोना लागेको छ, कम्पनीले तलब रोकिदिएको छ, अहिले कमाउने म मात्रै हो । मैले पनि कमाइनँ भने परिवार के खान्छ ?’ विलालले प्रहरीलाई प्रश्न गरे ।
‘तिमी भोकको कुरा गर्छौ, यहाँ रोग लागेर अस्पताल जान्छु भनेर आएकालाई त रोकिएको छ, हामीले त माथिको आदेश मान्ने हो, तिमीलाई हाम्रो भनाइ विश्वास लागेन भने माथि कुरा गर,’ प्रहरीले विलाललाई सुझाब दिए । मोटरग्यारेजमा काम गर्ने विलाल बिलखबन्दमा परे, ‘माथि’ कसलाई चिन्ने, कसलाई सोध्ने ?
गोर्खा छेबेटारका प्रकाश वाइबाकी बिरामी आमा ट्याक्सीमा छटपटाइरहेकी छिन् । मुटुरोगी प्रकाशकी आमा सानुमायालाई एम्बुलेन्स, ट्रक र गाडीको चर्को आवाजले झन् गाह्रो बनाएको छ । प्रकाश ट्राफिक प्रहरीसँग बिन्ती गर्दै छन्, ‘खाली साइडबाट त जान दिनुहोस् । आमाको ज्यान जाला भन्ने डर भइसक्यो ।’
बिरामी आमालाई ट्याक्सीमा राखेर प्रकाशले पालो पर्खेका छन् । तर, सडकको एक किनारा खाली भए पनि बिरामी बोकेका सवारीसाधन जान दिइएको छैन । पाठेघरको समस्या भएकी महिला बोकेर धादिङको मलेखुबाट आएको एम्बुलेन्स साइरन बजाउँदै अगाडि जान खोज्छ । ट्राफिक प्रहरीले सिटी फुक्दै एम्बुलेन्सलाई सडक किनारमा रोक्छन् र भन्छन्, ‘लाइनमा बस्ने ।’
एम्बुलेन्सभित्र पीडाले छटपटाइरहेकी लक्ष्मी अर्यालका छिमेकी गणेश अर्याल ट्राफिकसँग हात जोडेरै बिन्ती गर्छन् । तर, एम्बुलेन्सलाई पनि लाइनमा क्रमशः जान दिने मुडमा छन् प्रहरी ।
उनी नियम कडा छ भन्ने मुडमा छन्, तर त्यहीवेला फोनमा आएको सन्देशको भरमा उनले केही निजी गाडीलाई भने अगाडि बढ्न दिइरहेका छन् । तर, मोटरसाइकल र कतिपय गाडीलाई भने प्रहरीले त्यहाँ पर्खन पनि नदिई फर्काइरहेको छ । नियमका नाममा भइरहेको यो तमासा हेर्न सर्वसाधारण विवश छन् ।
काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाउनेको भिडमा छन् नुवाकोट बट्टारका प्रवेश खनाल र अमिता खनाल । लकडाउनअगाडि नुवाकोट घर गएका उनीहरू घरबेटीले सामान फालिदिने धम्की दिएपछि कोठाको सामान सार्न काठमाडौं जान आएका हुन् । ‘घरबेटीले सामान नै फाल्दिन्छु भनेपछि आएका हौँ । तर, प्रहरीले पास देखाउँदा पनि जान दिँदैनन्,’ प्रवेशले गुनासो गरे ।
हेटौँडाकी मुना बिसंखेका डेढ वर्षको बच्चा बिरामी छन् । त्यसैले झरीमा भिज्दै मोटरसाइकल चलाएका श्रीमान्को पछाडि उनी बच्चा समातेर बसेकी छिन् । तर, स्थानीय तहले दिएको पास काम लाग्दैन भनेर प्रहरीले फर्काउन खोजेपछि मुनाले डेढ वर्षको छोरालाई काखको ओतबाट झिकिन् ।
र, प्रहरीको अगाडि तेस्र्याउँदै भनिन्, ‘यसको उपचार गर्दिनुहुन्छ तपाईं ? पानीमा भिजाउँदै हामी घुम्न काठमाडौं जान लागेको हो ? मान्छेको ज्यान गए जाओस्, तमासा हेर्नु भनेर सरकारले आदेश दिएको छ ?’ तर, एउटी आमाको यो रोदनले पनि प्रहरीलाई गलाउन सकेन । ‘यहाँबाट छोड्यो भने माथि नागढुंगाबाट फोन आउँछ, हामीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
बालबालिका मात्र होइन, अशक्त र अपांगलाई समेत प्रहरीले झरीमा भिजाउँदै रोकेर राखेको छ । लमजुङ सुन्दर बजारका सरोज सेढाईंको मेरुदण्डमा स्टिल राखिएको छ । हरेक तीन महिनामा उनले जाँचका लागि काठमाडौं आउनुपर्छ । यसपालि ढिलो आउँदा पनि प्रहरीले रोक्यो ।
अपांगता भएको नागरिकको परिचयपत्र, नगरपालिकाको पास देखाउँदा पनि प्रहरीले उनलाई काठमाडौं छिर्न दिएन । भाइसँग मोटरसाइकलमा आएका सरोजलाई प्रहरीले ‘बरु हिँडेर जानुहोस्, तर मोटरसाइकल भने जान दिन्नौँ’ भन्यो । प्रहरीले मान्छेबाट होइन, मोटरसाइकलसँग समस्या छ भन्ने सन्देश दियो ।
‘ढाँटेको छैन, लुकाएको छैन, ढाडको घाउ हेर्दा पनि हुन्छ,’ सरोजले प्रहरीसँग हारगुहार गरे । तर, प्रहरीले उनको कुरै सुनेन । त्यसपछि उनी ओत लाग्न किनारको रूखतर्फ लागे ।
सवारी पास जाँचका नाममा प्रहरी प्रशासन कतिसम्म त्रूmर बनेको छ भने वीर अस्पतालमा एक्लै छटपटाइरहेका बिरामी बुबाको स्याहार गर्न आएका यात्रुको पीडाले पनि प्रस्ट पार्छ । वीर अस्पतालमा भर्ती भएका बुबाको हेरचाह गर्न भन्दै धादिङ खाल्डेबेँसीबाट विष्णु रम्तेल काठमाडौं जान हिँडे । दुई घन्टा हिँडेपछि धादिङको गल्छी पुगेका उनलाई काठमाडौं पुर्याउन कोही तयार भएनन् ।
हिँड्दै काठमाडौं आउन लागेका विष्णुलाई बाटोमा एउटा ट्याक्सीचालकले लिफ्ट दिए । तर, उनीहरूलाई प्रहरीले सिस्नेखोलाबाटै फर्कायो । काठमाडौं आउनेको यो भिडमा अधिकांश उपचार गराउन आउने छन् । अरू कतिपय टुटेको रोजगारी जोड्न आउने छन् । कपितय भने आफुले गरिरहेको व्यवसाय फेरि सञ्चालन गर्न उद्देश्यले फर्किएका छन् ।
फरक–फरक उद्देश्यले आएका सबैको नियति एउटै छ काठमाडौं नाकामा । तर, माथिको आदेश भन्दै सबैलाई प्रहरीले रोकेर दुःख दिएपछि हामीले थानकोटको इन्चार्जका रूपमा खटिएका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठलाई केही जिज्ञासा राख्ने प्रयास ग¥यौँ ।
‘अहिले जिल्लाभित्रको आन्तरिक सवारी मात्र खुलेको हो । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पासका आधारमा मात्र सवारीसाधन छिर्न दिने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको पास बोकेका मान्छेलाई हामीले फर्काइरहेका छौँ । त्यस्तै, अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट मात्र पनि पुग्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको अनिवार्य छ ।’
मंगलबार एकैदिन थपिए ५३८ संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ? (सूचीसहित)
नेपालमा मंगलबार थप ५३८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म १० हजार ९९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या १० हजार ९९ पुगेको जानकारी दिएका हुन् । डा गौतमका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका एकजना पुरुष, सप्तरीका २ जना पुरुष, सुनसरीका २ जना महिला र एकजना पुरुष, कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका १ जना पुरुष तेह्रथुमका २ जना पुरुष, झापाका ८ जना महिला र एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका २ जना पुरुष र मोरङका एक पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल राजविराजमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका एक जना महिला र १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा महोत्तरीका १२ पुरुष र सप्तरीका ३ जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा अछामका २ जना महिला , अर्घाखाँचीका २ जना पुरुष, बाग्लुङका एक महिला र ५ पुरुष, बझाङका ३ जना महिला र १६ जना पुरुष, बाजुराका ११ जना महिला र ९ जना पुरुष, डडेल्धुराका एकजना पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी धादिङका एकजना महिला र १७ जना पुरुष, गोरखाका ६ जना महिला र ७ जना पुरुष, गुल्मीका एकजना महिला र २ जना पुरुष, कैलालीका एकजना महिला र १५ जना पुरुष, कञ्चनपुरका २ महिला र ७ जना पुरुष, कास्कीका ४ महिला र ३ जना पुरुष, नवलपरासी पुर्वका २ महिला र १९ पुरुष, पर्वतका ४ जना महिला र १७ जना पुरुष, प्युठानका ५ जना पुरुष, रौतहटका एकजना महिला र १२ जना पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी रुपन्देहीका एकजना पुरुष, सर्लाहीका २ जना पुरुष, सिराहाका एकजना महिला र ६ जना पुरुष र स्याङ्जाका २ महिला र ७ जना पुरुष, र तनहुका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका ३९ जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा गोरखाका २ महिला र ३ जना पुरुष, स्याङ्जाका एक महिला र ५ जना पुरुष, बाग्लुङका ८ जना पुरुष, गोरखाका २ महिला र ९ पुरुष, कास्कीका एक पुरुष, लमजुङका एक महिला र ४ जना पुरुष, नवलपरासी पुर्वका एकजना पुरुष, तनहुँका ७ जना पुरुष, स्याङ्जाका एकजना महिला र ६ जना पुरुष र पर्वतका एकजना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परीषणमा गुल्मीका २ जना पुरुष पाल्पाका ४ जना महिला र ४४ जना पुरुष, रुपन्देहीका २ जना पुरुष, प्युठानका एकजना महिला र ४४ जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दाङका १९ जना पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रवक्ता डा गौतमका अनुसार सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका ४ जना पुरुष, सुर्खेतका ८ जना महिला र १५ जना पुरुष, दैलेखका एक महिला र २ जना पुरुष र हुम्लाका एक महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा कालीकोटका एकजना पुरुष, दैलेखका एकजना महिला र १८ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा अछामका २ जना महिला र ३ जना पुरुष, बझाङका २ महिला र एकजना पुरुष डडेल्धुराका एक महिला र २ जना पुरुष, कैलालीका ६ जना महिला र १६ जना पुरुष र कञ्चनपुरका ३ जना महिला र ५ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हालसम्म १० हजार ९९ पुगेको छ । नयाँ संक्रमति पुष्टि भएका मध्ये ९० महिला र ४४८ पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा गौतमले जानकारी दिए ।
त्रिविमा कोरोनाले रोकिएका परीक्षा आजदेखि शुरु
अमेरिकाका पूर्ववाणिज्य मन्त्रीमाथि चीनले किन लगायो प्रतिबन्ध ?